ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် လာမည့်နှစ်များ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ | CeleTrend
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် လာမည့်နှစ်များ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ
February 16, 2021 by CeleTrend
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာ တပ်မတော်ကနေ အာဏာထိန်းခြင်း ဟု ခေါင်းစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံတော်အာဏာကို တစ်နှစ်ကြာ ရယူပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် ပြုလုပ်မယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။မည်သို့ပဲ ခေါင်းစဉ်တပ်ပေမယ့် ဒါဟာ အာဏာသိမ်းခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာပြည်သူအများနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကပါ သတ်မှတ် ယူဆ သိမြင်ကြတဲ့အတွက် နိုင်ငံကြီးများဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေ စတင်ဖို့ လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာ လာရောက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထဲက အချို့ဟာလည်း ပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ ကြေငြာချက်တွေ ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဥပမာ ဂျပန် ကီရင် ဘီယာလုပ်ငန်း၊ ပူးမား စက်သုံးဆီလုပ်ငန်း စသဖြင့် ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်လုပ်ငန်း အများအပြားကလဲ ထပ်မံထွက်ခွာဖို့ ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံအနေနဲ့ ပိတ်ဆို့မှု့ ပြင်းထန်ခဲ့ရင် သူ့နိုင်ငံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ထွက်ခွာစေတာမျိုးလဲ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ အမေရိကန် လုပ်ငန်းတွေ ဥပမာ KFC လိုမျိုးလဲ ပြန်လည် ထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစီးပွားရေး အနေနဲ့လည်း ကိုဗစ် အခြေအနေကြောင့် လုပ်ငန်းတွေ တုံ့ဆိုင်းရာကနေ ယခု နိုင်ငံရေး အခြေအနေကြောင့် အတော်များများဟာ ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အတွက် စီးပွားရေးကျဆင်းမှု့က လဲ အမှန်တကယ် ကို ထပ်မံတိုးလာနိုင်ပါသေးတယ်။မြန်မာပြည်အနေနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ အားနည်းပြီး ပြည်ပကသာ သွင်းကုန် အဓိက အားပြုရတာ အရင်ကထဲက ဖြစ်တဲ့အပြင် အထက်ကလို လုပ်ငန်းကြီးတွေ ပြန်ထွက်ကာ နိုင်ငံရေး အခြေအနေကြောင့် ရှိထားတဲ့ ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းလေးတွေပါ ရပ်သွားမယ် ဆိုရင် သွင်းကုန် ကို ပိုအားပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကွာဟချက်ကနေ ဒေါ်လာငွေတန်ဖိုး ပိုပြီး မာလာပြီး သွင်းကုန်တွေ ဈေးနှုန်း တက်လာ နိုင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေ ထွက်ခွာတာ၊ စီးပွားရေး ကျဆင်းတာ၊ ဒေါ်လာတန်ဖိုးမာလာတာ ၊ စတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ကြုံလာနိုင်တာကတော့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း Inflation မြင့်မားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့နောက်ဆက်တွဲ ကတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းများ ကြီးမြင့်လာခြင်း ကို ကြုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံမှုကောင်စီက ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲ???လက်ရှိ စစ်တပ် က တင်မြောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံတော်စီမံမှုကောင်စီ အနေနဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေများ ကို တည်ငြိမ်သွားအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာ ယုံမှားဖွယ်မရှိပါဘူး။အဲဒီ နည်းလမ်းတွေထဲမှာမှ အလုပ်မတက်တဲ့ CDM ဝန်ထမ်းများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ ဝန်ထမ်း လစာ တိုးပေးခြင်း ကိုလဲ လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့် တစ်ချက်ကတော့ စီးပွားရေး ပြန်လည် လည်ပတ်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို လုပ်ဆောင်ရာမှာလည်း ပြည်တွင်းစီးပွားရေး တိုးတက်စေတာ၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့ ဖိတ်ခေါ်တာ ဆိုတဲ့ နှစ်ခုကို အဓိက ဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ ငွေကြေး လိုအပ်တဲ့အပြင် လက်ရှိ ပြည်သူအများရဲ့မကျေနပ်မှုများကြောင့် အခွန်ငွေ ရရှိမှု့မှာလည်း အားနည်းလာနိုင်တာကြောင့် ငွေ လိုအပ်မှု့က ပိုပြီး များလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေက..ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကို တိုးတက်စေတာဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမှု့ ခေါ်ယူတာဖြစ်ဖြစ် အချိန် နှစ်နဲ့ချီယူရလေ့ရှိတဲ့အတွက် လတ်တလောလိုငွေကို ပြည့်ဖို့က အတော်လေးဝေးနိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေတွေ ကတော့ နိုင်ငံတကာ ချေးငွေရယူတာ၊ အစိုးရ ငွေတိုက်စာချုပ်တွေ ထုတ်ရောင်းတာ၊ ဘဏ်တိုး နှုန်းမြှင့်ပေးပြီး ငွေတွေအပ်စေတာ၊ ဗဟိုဘဏ်ကနေ ငွေချေးယူတာ၊ သယံဇာတ ရောင်းစားတာ၊ လိုငွေကို ရိုက်ထုတ်တာ စတဲ့နည်းတွေ သုံးလို့ရပါတယ်။ဒီနည်းတွေထဲကမှ ပိတ်ဆို့မှုမရှိပဲ အလွယ်ကူဆုံးကတော့ ငွေရိုက်ထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းစဉ်ကို ပြန်ကြည့်ရင်လည်း အောက်ပါပုံထဲအတိုင်း ၁၉၈၈ ကနေ ၁၉၈၉ တစ်နှစ် အတွင်းမှာတင် Inflation ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ဟာ ၅% လောက်ကနေ ၄၅% လောက်ကို ခုန် တက်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။၁၀ ဆလောက် ခုန်တက်သွားတာပါပဲ။အောက်ကပုံမှာပဲဆက်ပြီး လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် Money Supply ပြုလုပ်မှု ဟာ ဆယ်စုနှစ်တွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ ထောင် တက်နေတာကိုလဲ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ငွေရိုက်ထုတ် အသုံးပြုမှု့ဟာ ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့ နိုင်ငံတိုင်းဟာ ငွေကြေးကို အလွယ်တကူ ရိုက်ထုတ်လေ့မရှိပဲ လည်ပတ်နေတဲ့ ငွေပမာဏကို မှန်းဆပြီးတော့သာ နှစ်စဉ် ကန့်သတ်ပမာဏ တစ်ခုကို တွက်ချက်ရိုက်ထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဟာ ၁၀%ရှိ နေပြီး တကယ်လို့ အတိတ်ကလို ၁၀ ဆသာ ခုန်တက်မယ်ဆိုရင် ၁၀၀ တန် ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ နောက်နှစ်မှာ ၂၀၀ ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အဆိုးဆုံးဆိုတဲ့ အခြေအနေကို သုံးသပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအခြေအနေ တည်ငြိမ်သွားရင်တော့ ဒီလို ထိုးတက်နေတဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဟာ ပြန်လည် ကျဆင်း တတ်ပါတယ်။တကယ်လို့ စစ်တပ်အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ချက်ချင်း ပြန်လည်လွှဲ ပေးရင်တောင် အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ကုစားတည်ထောင်ဖို့လိုအပ်ဦးမှာ ဖြစ်လို့ အထက်ကလောက် မဆိုးစေကာမူ inflationကို ကြုံရနိုင်ပါတယ်
ဘာလုပ်ကြမလဲ???…ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဈေးတက် တာက အမြင်သာဆုံး ဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲကတော့ ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးတွေပါ ဈေးလိုက်တက် တတ်ပါတယ်။ဥပမာ အိမ် ခြံမြေ တိုက်ခန်း စတာတွေရဲ့ဈေးတွေ ၊ ရွှေ ဈေးနှုန်း ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ကို တောင့်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ကတေ့ာ ငွေကြေးဖောင်းပွတဲ့ နှုန်းအတိုင်း ဈေးလိုက်တက်နေမယ့် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဝယ်ယူထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမ အချက်ကတော့ ပြန်ရောင်းရလဲလွယ် ဈေးလဲမာတဲ့ ရွှေ နဲ့ဒေါ်လာ ဟာ လူကြိုက်များလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်လာ က နိုင်ငံခြားငွေ ဖြစ်ပြီး ယခင်ကလဲ နိုင်ငံခြားငွေလက်ဝယ်ထားရှိမှု့ ဆိုပြီး ပုဒ်မတပ်တာမျိုးလဲ ရှိခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။အချုပ်ကတော့ ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေကို ပြောင်းလဲဝယ်ယူထားတာ ပိုကောင်းမယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ကျွန်တော်တစ်ယောက် ထဲအမြင်ပါပဲ။တစ်ခု ရှိတာကတော့ စီးပွားရေး အနေနဲ့လဲ နိုင်ငံတော်စီမံ ကောင်စီက ပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ဖို့ စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ တစ်ခုခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်တာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ မော်တော်ကား တင်သွင်းခွင့်တွေပေးတာ ၊ ပါမစ်တွေ ချပေးတာ၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာတွေ ဆောက် လုပ်ပေးတာ စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။အချုပ်ပြောရရင်တော့ လာမယ့် နှစ်တွေမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ဒဏ်ကို ယခင်ထက် ပိုပြီးခံရမှာ ကတော့ အသေအချာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိ တို့ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေကို မလျော့ပါးစေအောင် နည်းလမ်းတွေ စဉ်းစားပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်းကို အသိပေးမျှဝေလိုတာပါပဲခင်ဗျား။ရေးသားသူ ကောင်းဟိန်းစိုး
ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနေ့ မနကျအစောပိုငျးမှာ တပျမတျောကနေ အာဏာထိနျးခွငျး ဟု ခေါငျးစဉျဖွငျ့ နိုငျငံတျောအာဏာကို တဈနှဈကွာ ရယူပွီး ရှေးကောကျပှဲ ပွနျလညျ ပွုလုပျမယျလို့ ကွငွောခဲ့ပါတယျ။မညျသို့ပဲ ခေါငျးစဉျတပျပမေယျ့ ဒါဟာ အာဏာသိမျးခွငျးသာ ဖွဈတယျလို့ မွနျမာပွညျသူအမြားနဲ့ နိုငျငံတကာ ကပါ သတျမှတျ ယူဆ သိမွငျကွတဲ့အတှကျ နိုငျငံကွီးမြားဟာ မွနျမာနိုငျငံအပျေါ အရေးယူပိတျဆို့မှုတှေ စတငျဖို့ လုပျဆောငျလာကွပါတယျ။ပွညျတှငျးမှာ လာရောကျ လုပျကိုငျနတေဲ့ နိုငျငံခွား စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားထဲက အခြို့ဟာလညျး ပွနျလညျထှကျခှာဖို့ ကွငွောခကျြတှေ ထုတျလာခဲ့ပါတယျ။ဥပမာ ဂပြနျ ကီရငျ ဘီယာလုပျငနျး၊ ပူးမား စကျသုံးဆီလုပျငနျး စသဖွငျ့ ဖွဈပွီး နောကျထပျလုပျငနျး အမြားအပွားကလဲ ထပျမံထှကျခှာဖို့ ရှိနိုငျပါသေးတယျ။နောကျတဈခကျြအနနေဲ့ကတော့ အမရေိကနျ နိုငျငံအနနေဲ့ ပိတျဆို့မှု့ ပွငျးထနျခဲ့ရငျ သူ့နိုငျငံ စီးပှားရေး လုပျငနျးမြားကို ပွနျလညျထှကျခှာစတောမြိုးလဲ ရှိလာနိုငျပါတယျ။ဒါဆိုရငျတော့ အမရေိကနျ လုပျငနျးတှေ ဥပမာ KFC လိုမြိုးလဲ ပွနျလညျ ထှကျခှာနိုငျပါတယျ။ ပွညျတှငျးစီးပှားရေး အနနေဲ့လညျး ကိုဗဈ အခွအေနကွေောငျ့ လုပျငနျးတှေ တုံ့ဆိုငျးရာကနေ ယခု နိုငျငံရေး အခွအေနကွေောငျ့ အတျောမြားမြားဟာ ရပျဆိုငျးသှားတဲ့အတှကျ စီးပှားရေးကဆြငျးမှု့က လဲ အမှနျတကယျ ကို ထပျမံတိုးလာနိုငျပါသေးတယျ။မွနျမာပွညျအနနေဲ့ ကုနျထုတျလုပျငနျးတှေ အားနညျးပွီး ပွညျပကသာ သှငျးကုနျ အဓိက အားပွုရတာ အရငျကထဲက ဖွဈတဲ့အပွငျ အထကျကလို လုပျငနျးကွီးတှေ ပွနျထှကျကာ နိုငျငံရေး အခွအေနကွေောငျ့ ရှိထားတဲ့ ပွညျတှငျးကုနျထုတျလုပျငနျးလေးတှပေါ ရပျသှားမယျ ဆိုရငျ သှငျးကုနျ ကို ပိုအားပွုရမှာဖွဈပါတယျ။
အကြိုးဆကျအနနေဲ့ကတော့ ပို့ကုနျ သှငျးကုနျ ကှာဟခကျြကနေ ဒျေါလာငှတေနျဖိုး ပိုပွီး မာလာပွီး သှငျးကုနျတှေ ဈေးနှုနျး တကျလာ နိုငျပါတယျ။လုပျငနျးတှေ ထှကျခှာတာ၊ စီးပှားရေး ကဆြငျးတာ၊ ဒျေါလာတနျဖိုးမာလာတာ ၊ စတဲ့ အခကျြတှကွေောငျ့ ကွုံလာနိုငျတာကတော့ ငှကွေေးဖောငျးပှမှုနှုနျး Inflation မွငျ့မားလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ငှကွေေးဖောငျးပှမှု့နောကျဆကျတှဲ ကတော့ ကုနျဈေးနှုနျးမြား ကွီးမွငျ့လာခွငျး ကို ကွုံရမှာ ဖွဈပါတယျ။နိုငျငံတျောစီမံမှုကောငျစီက ဘာတှလေုပျနိုငျမလဲ???လကျရှိ စဈတပျ က တငျမွောကျထားတဲ့ နိုငျငံတျောစီမံမှုကောငျစီ အနနေဲ့ လကျရှိ အခွအေနမြေား ကို တညျငွိမျသှားအောငျ နညျးမြိုးစုံနဲ့လုပျဆောငျမယျဆိုတာ ယုံမှားဖှယျမရှိပါဘူး။အဲဒီ နညျးလမျးတှထေဲမှာမှ အလုပျမတကျတဲ့ CDM ဝနျထမျးမြားကို ဆှဲဆောငျနိုငျဖို့ ဝနျထမျး လစာ တိုးပေးခွငျး ကိုလဲ လုပျလာနိုငျပါတယျ။ နောကျမဖွဈမနေ လုပျရမယျ့ တဈခကျြကတော့ စီးပှားရေး ပွနျလညျ လညျပတျအောငျ လုပျဆောငျရမှာဖွဈပါတယျ။ဒီလို လုပျဆောငျရာမှာလညျး ပွညျတှငျးစီးပှားရေး တိုးတကျစတော၊ နိုငျငံခွား ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု့ ဖိတျချေါတာ ဆိုတဲ့ နှဈခုကို အဓိက ဆောငျရှကျရပါလိမျ့မယျ။ဒါတှေ ဆောငျရှကျဖို့ ငှကွေေး လိုအပျတဲ့အပွငျ လကျရှိ ပွညျသူအမြားရဲ့မကနြေပျမှုမြားကွောငျ့ အခှနျငှေ ရရှိမှု့မှာလညျး အားနညျးလာနိုငျတာကွောငျ့ ငှေ လိုအပျမှု့က ပိုပွီး မြားလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဖွဈနိုငျခကြေ..ပွညျတှငျးစီးပှားရေးကို တိုးတကျစတောဖွဈဖွဈ နိုငျငံခွားရငျးနှီးမှု့ ချေါယူတာဖွဈဖွဈ အခြိနျ နှဈနဲ့ခြီယူရလရှေိ့တဲ့အတှကျ လတျတလောလိုငှကေို ပွညျ့ဖို့က အတျောလေးဝေးနိုငျပါတယျ။ဒီအတှကျ ဖွဈနိုငျခွတှေေ ကတော့ နိုငျငံတကာ ခြေးငှရေယူတာ၊ အစိုးရ ငှတေိုကျစာခြုပျတှေ ထုတျရောငျးတာ၊ ဘဏျတိုး နှုနျးမွှငျ့ပေးပွီး ငှတှေအေပျစတော၊ ဗဟိုဘဏျကနေ ငှခြေေးယူတာ၊ သယံဇာတ ရောငျးစားတာ၊ လိုငှကေို ရိုကျထုတျတာ စတဲ့နညျးတှေ သုံးလို့ရပါတယျ။ဒီနညျးတှထေဲကမှ ပိတျဆို့မှုမရှိပဲ အလှယျကူဆုံးကတော့ ငှရေိုကျထုတျတာပဲဖွဈပါတယျ။သမိုငျးစဉျကို ပွနျကွညျ့ရငျလညျး အောကျပါပုံထဲအတိုငျး ၁၉၈၈ ကနေ ၁၉၈၉ တဈနှဈ အတှငျးမှာတငျ Inflation ငှကွေေးဖောငျးပှမှု့ဟာ ၅% လောကျကနေ ၄၅% လောကျကို ခုနျ တကျသှားတာတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။၁၀ ဆလောကျ ခုနျတကျသှားတာပါပဲ။အောကျကပုံမှာပဲဆကျပွီး လလေ့ာကွညျ့မယျဆိုရငျ Money Supply ပွုလုပျမှု ဟာ ဆယျစုနှဈတှထေဲမှာ အမွငျ့ဆုံးအနနေဲ့ ထောငျ တကျနတောကိုလဲ တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအတှကျ ငှရေိုကျထုတျ အသုံးပွုမှု့ဟာ ဖွဈနိုငျခမြေားပါတယျ။တကယျတမျးတော့ နိုငျငံတိုငျးဟာ ငှကွေေးကို အလှယျတကူ ရိုကျထုတျလမေ့ရှိပဲ လညျပတျနတေဲ့ ငှပေမာဏကို မှနျးဆပွီးတော့သာ နှဈစဉျ ကနျ့သတျပမာဏ တဈခုကို တှကျခကျြရိုကျထုတျလရှေိ့ပါတယျ။လကျရှိမှာတော့ မွနျမာနိုငျငံ ငှကွေေးဖောငျးပှမှုဟာ ၁၀%ရှိ နပွေီး တကယျလို့ အတိတျကလို ၁၀ ဆသာ ခုနျတကျမယျဆိုရငျ ၁၀၀ တနျ ပစ်စညျးတဈခုဟာ နောကျနှဈမှာ ၂၀၀ ကပျြ ကသြငျ့မှာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ဒါဟာ အဆိုးဆုံးဆိုတဲ့ အခွအေနကေို သုံးသပျတာ ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံအခွအေနေ တညျငွိမျသှားရငျတော့ ဒီလို ထိုးတကျနတေဲ့ ငှကွေေးဖောငျးပှမှုဟာ ပွနျလညျ ကဆြငျး တတျပါတယျ။တကယျလို့ စဈတပျအနနေဲ့ နိုငျငံတျောအာဏာကို ခကျြခငျြး ပွနျလညျလှဲ ပေးရငျတောငျ အခွအေနတှေကေိုပွနျလညျကုစားတညျထောငျဖို့လိုအပျဦးမှာ ဖွဈလို့ အထကျကလောကျ မဆိုးစကောမူ inflationကို ကွုံရနိုငျပါတယျ
ဘာလုပျကွမလဲ???…ငှကွေေးဖောငျးပှမှုကွောငျ့ ကုနျပစ်စညျးတှေ ဈေးတကျ တာက အမွငျသာဆုံး ဖွဈပွီး နောကျဆကျတှဲကတော့ ပိုငျဆိုငျမှုတနျဖိုးတှပေါ ဈေးလိုကျတကျ တတျပါတယျ။ဥပမာ အိမျ ခွံမွေ တိုကျခနျး စတာတှရေဲ့ဈေးတှေ ၊ ရှေ ဈေးနှုနျး ဒျေါလာဈေးနှုနျးတှတေို့ ဖွဈပါတယျ။ ငှကွေေးဖောငျးပှမှု့ကို တောငျ့ခံနိုငျဖို့အတှကျကတေ့ာ ငှကွေေးဖောငျးပှတဲ့ နှုနျးအတိုငျး ဈေးလိုကျတကျနမေယျ့ ပိုငျဆိုငျမှုတှကေို ဝယျယူထားခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ပထမ အခကျြကတော့ ပွနျရောငျးရလဲလှယျ ဈေးလဲမာတဲ့ ရှေ နဲ့ဒျေါလာ ဟာ လူကွိုကျမြားလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒျေါလာ က နိုငျငံခွားငှေ ဖွဈပွီး ယခငျကလဲ နိုငျငံခွားငှလေကျဝယျထားရှိမှု့ ဆိုပွီး ပုဒျမတပျတာမြိုးလဲ ရှိခဲ့ဖူးပါသေးတယျ။အခြုပျကတော့ ပိုငျဆိုငျမှု့တှကေို ပွောငျးလဲဝယျယူထားတာ ပိုကောငျးမယျလို့ သုံးသပျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါဟာ ကြှနျတျောတဈယောကျ ထဲအမွငျပါပဲ။တဈခု ရှိတာကတော့ စီးပှားရေး အနနေဲ့လဲ နိုငျငံတျောစီမံ ကောငျစီက ပွညျသူတှပြေျောရှငျဖို့ စိတျအပွောငျးအလဲဖွဈဖို့ တဈခုခုကို ဖနျတီးပေးနိုငျတာမြိုးလဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ဥပမာ မျောတျောကား တငျသှငျးခှငျ့တှပေေးတာ ၊ ပါမဈတှေ ခပြေးတာ၊ တနျဖိုးနညျးအိမျယာတှေ ဆောကျ လုပျပေးတာ စတာတှေ ဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။အခြုပျပွောရရငျတော့ လာမယျ့ နှဈတှမှော ငှကွေေးဖောငျးပှမှု ဒဏျကို ယခငျထကျ ပိုပွီးခံရမှာ ကတော့ အသအေခြာဖွဈတဲ့အတှကျ မိမိ တို့ပိုငျဆိုငျမှု့တှကေို မလြော့ပါးစအေောငျ နညျးလမျးတှေ စဉျးစားပွီး ဆောငျရှကျဖို့ လိုအပျပါကွောငျးကို အသိပေးမြှဝလေိုတာပါပဲခငျဗြား။ရေးသားသူ ကောငျးဟိနျးစိုး
မိုဘိုင်းအော်ပရေတာတွေမှာ TRACKING စက်တပ်ပြီး သုံးစွဲသူကို ခြေရာခံလိုက်ရင် ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်မလဲ…?
အာဏာသိမ်းအစိုးရကအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှုထပ်တိုး တရားစွဲဆို